बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदमुक्त
- कान्तिपुर संवाददाता (सुनसरी) - बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेटले पदबाट बर्खास्ती सिफारिस गरेको दुई सातापछि उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गरेको छ । सिनेट बैठकको सिफारिसलाई सदर गर्दै सरकारले पदमुक्त गरेको छ । रौनियारलाई तत्कालीन एमाओवादी–कांग्रेस सरकारले दुई वर्षअघि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपकुपतिमा नियुक्त गरेका थिए । रौनियार कांग्रेस कोटाबाट उपकुलपति बनेका हुन् ।
प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान रहेको र फागुन १७ गते सहकुलपति उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले प्रा.डा. रौनियारलाई बर्खास्त गर्न कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियारलाई पदमुक्त गर्न पठाएको सिफारिस सदर भएर आएको जनाए ।
उनले भने, ‘रौनियारलाई पदमुक्त गरिएको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको छ । अब रौनियारलाई पदमुक्त गरेको जानकारी आज वा भोलिसम्ममा पत्रमार्फत दिइनेछ ।’ चौरसियाले प्रधानमन्त्रीले सिनेट सिफारिसअनुसार फागुन २६ गते नै रौनियारलाई हटाउने निर्णय गरे पनि सदर गरेको पत्र भने बिहीबारमात्र प्राप्त गरेको बताए । सिनेटले रौनियारले पदीय दायित्व पूरा नगरी कुलपति र सहकुलपतिको निर्देशनलाई अटेर गरेकाले बर्खास्ती गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पदमुक्त उपकुलपति रौनियारले आफूलाई सिनेटमा पनि बस्न नदिई स्वास्थ्यमन्त्रीले एकलौटी ढंगबाट सिफारिस गरेर हटाउने सिफारिस गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई त्यस्तो केही जानकारी आएको छैन । पहिला पत्र हेरौं के भनेर पदमुक्त गरिएको छ भनेका रहेछन् ।’ उनले षड्यन्त्र गरेर फसाएको उल्लेख गर्दै पदमुक्त नै गरे पनि अदालत जाने सोच नबनाएको बताए ।